Google dia manolotra endrika mailaka mamaly amin'ny Gmail sy Inbox | Androidsis
Google dia manavao ny Gmail amin'ny famolavolana mailaka havaozina
El Malaza ny marketing mailaka ary avy amin'ny boaty mailaka dia ahitantsika ny karazana dokam-barotra izay voalamina tsara ary mametraka antsika alohan'ny karazana tolotra rehetra izay avy amin'ireo gazety ireo orinasa marobe izay nanoloranay ny mailaka anay. Ahoana raha misy toerana tsara hanatsarana ny fampisehoana ireo mailaka ireo ary eto no ahitantsika fanavaozana mahaliana.
Farafaharatsiny ho an'ny Gmail, satria manitsy i Google ny fomba hahitanao ireo mailaka, indrindra rehefa avy amin'ny smartphone no anaovana azy, zavatra efa mahazatra ary nametraka ny fitantanana ny mailaka rehetra avy amin'ny solosaina. Google dia hanavao ny Gmail sy Inbox ho an'ny Gmail hanohanana ny famolavolana mailaka mamaly. Midika izany fa ny mailaka misy famolavolana mamaly dia hifanaraka amin'ny efijery finday avo lenta.
Ity famolavolana mamaly ity ampifanaraho ny lahatsoratra, ny rohy ary ny bokotra ho lehibe kokoa ary mora kokoa ny mamaky sy manery amin'ny efijery finday avo lenta. Andao lazaina fa ny zava-drehetra dia hamboarina amin'ny endrika finday avo lenta na takelaka ka tsy misy singa tsy mifanaraka intsony ary mahafinaritra ny maso izany.
Mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izay ihany koa, raha eo amin'ny PC-nao ianao ary mahazo mailaka natao ho an'ny finday, ity hamboarina mifanaraka tonga lafatra amin'ny haben'ny lehibe amin'ny monitor an'ny solosainao. Ny fanampiana ny mailaka mamaly ao amin'ny Gmail sy Inbox dia fanatsarana lehibe izay nilaina tokoa. Ka tsy mila mihodina amin'ny mailaka be intsony ianao izay noforonina ho an'ny birao, izay hitsitsy fotoana sy hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa.
Ity fampiasa ity dia ho naparitaka ho an'ny Gmail ary Inbox mandritra ny faran'ity volana ity ary manampy olon-kafa amin'ity taona ity toa ny ny fahaizana manampy kaonty Exchange.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google dia manavao ny Gmail amin'ny famolavolana mailaka havaozina
Ny Index Wases Driver Waze dia mampiseho izay misy ny tsy mampalahelo indrindra